စစ်ကောင်စီ့ ဖေဖော်ဝါရီကတည်းက အခုထိ တစိုက်မတ်မတ်သွားနေတဲ့ သတိပြုစရာဗျူဟာရဲ့ဦးတည်ချက်များ – Shwe Thadin
အထီးကျန် နိုင်ငံတွေလို့ ခေါ်တယ်။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ မြောက်ကိုရီးယား ￼ ပေါ့။.. မနေ့က ကျုံပျော် ဖြစ်စဉ်ကို အာဆီယံက အဖွဲ့တွေရောက်နေချိန်မှာကို ဖြစ်တယ်၊သတင်းကလည်း ကမ္ဘာကိုတန်းပြန့်တယ်။အခုလည်း ဒီမောဆိုမှာ ဘုရားရှိခို းကျောင်း ကို လ က် န က် ကြီးနဲ့ထုတယ်၊စာသင် ကျော င်းလို နေရာမျိုးတွေ မီးရှို့ တယ်။အဓိပ္ပာယ်က UN/US/EU မပြောနဲ့ အနီးဆုံး သူ့ကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့… အာဆီယံဆီကတောင် Legit_imacy ရဖို့ သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့သဘောပဲ။NLD ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲလိ မ် တယ် ဆိုတာ
သက်သေပြဖို့ မဲစာရင်း အတုတွေ လုပ်ပြီးပြီလို့ သိရတယ်။ပြီးရင် NLD ရဲ့ ထိပ် တန်းခေါင်းဆောင်တွေကို နှစ်ရှည် ထော င် ချ မယ်။NLD ကို ဖျ က် သိ မ်း မယ်၊ ပြီးရင် ၂၀၀၈ ခြေဥကို…. လိုသလောက်ပြင်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကို PR စနစ်ပြောင်းမယ်။ ပြီးရင် PR ရွေးကောက်ပွဲကို YMBA ကနေဖြစ်ဖြစ် ဝင်ပြီး သမ္မတနေရာကို ကူးမယ်။
ဒီရက်ပိုင်း ဆပ်ပြာလိုမျိုး ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်တာ ကို လိုက်ကြည့်တ ယ်။အရင်ရက်က ဆပ်ပြာ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်၊ နို့မှုန့် တွေကို.. မြဝတီဘက်ကနေ အဝင် ပိ တ်တယ်။ ￼ ဘာကြောင့်လဲ? တကယ်တော့ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ၂၀၁၀-၂၀၂၁ ကြားကာလနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်မှာ နိုင်ငံခြားငွေကို အင်တို က် အား တို က် သုံးခွင့်ရခဲ့တယ်။
အခု အထီးကျန် နိုင်ငံဖြစ်ပြီဆိုရင် အရှားပါးဆုံးဟာ နိုင်ငံခြားငွေပဲ၊ အဲဒီတော့ နိုင်ငံခြားငွေ ကို စစ်ရေးအတွက်၊… သူတို့ အကျိုးစီးပွား အတွက် ဆက်သုံးရမယ်။
အဲဒါကြောင့် Import သွ င်း ကုန် တွေကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု က န့် သ တ်လိမ့်မယ်။ပြီးရင် ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးပါ ဆိုတာ.. ပြန်လာမယ်။
Marketing Industry တစ်ခုလုံးပြိုဆ င်းသွားမယ်။ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Marketing ဆိုတာက ယှဉ်ပြိုင်ဈေး ကွ က် ရှိမှ လုပ်ကြတာ။ကောင်းကောင်းညံ့ညံ့ သူ့ပစ္စည်းပဲ သုံးစရာရှိရင် ဘယ်သူမှ Service/ Marketing မလုပ်ဘူး၊အဲဒီမှာ Digital Markeing ပညာရပ်တွေ၊…. Offline Marketing တွေ မလိုတော့ဘူး၊ နိုင်ငံတကာ Billboard တွေနေရာမှာ တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မ တော်သာ အဖ/ ပြည့်အင်အားဟာ ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိသည် စတာတွေပဲ
ပြ ည့် တ န် ဆာ လုပ်ငန်း လမ်းပေါ်အပြည့် ပြန်ရောက်နေပြီ။မအလ ဟာ အဲဒီလမ်းကို တကယ်သွားနေတာနော်၊… အလုံးစုံ ပျ က် သု ဉ်း ရေး၊ အထီးကျန် နိုင်ငံ တကယ်သွားနေတာ။￼ အဲဒီတော့ ဖြစ်နိုင်လား သူအောင်မြင်နိုင်လား? ဆိုရင် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ က န့် သ တ် ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ၁၀ နှစ်ပွင့်လင်းထားတဲ့ နိုင်ငံကို ချော က် ထဲ ပြ န် ဆွဲ ချလို့ မရဘူး။
NUG, PDF လည်းအချိန်တန် အား န ည်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်လို့ င တ်တဲ့ တစ်နေ့ကျ ထ ချ ကြဦး မှာပဲ။အဲဒီကျမှ ဆိုရင် အ ထိ အခို က် အ ကျ အဆုံး ဒီထက် အများကြီးပိုများလိမ့်မယ်။NUG ရော၊ ပြည်သူရော လုပ်လို့ရသမျှ အကုန်အခုအချိန် အား ထ ည့်ပြီး လုပ်ရင် တော် လှန်ရေးဟာ… အောင်မြင်နိုင်ချေ၊ အထိ အခို က် နည်းနိုင်ချေ အများဆုံးပဲ။တော်လှန်ရေး က
လုပ်တဲ့သူတွေ လုပ်လိမ့်မယ်၊ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်ရင် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဆိုပြီး ကိုယ့်အတ္တတစ်ခုတည်းနဲ့ Personal Development နဲ့ ကိုယ့် စီးပွားရေး ကိုပဲ လှိမ့်လုပ်နေတဲ့သူတွေ ရှိလာပြီ။…. အဲဒီလိုလူတွေ များလာရင် တော်လှန်ရေးဟာ မှု န် ဝါးသွားလိမ့်မယ်။